Ciidanka Danab oo khaarijiyay saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidanka Danab oo khaarijiyay saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidanka Danab oo khaarijiyay saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab
Kumaandooska Danab ayaa Howlgalka ka fuliyay degaanada Dhisheeg-waamo,Maroodi-gubow iyo Dhaay unbow oo qiyaasti 75-km u jirta magaalada Kismaayo.
Taliyaha guutada 16-aad ee Kumaandooska Danab Gaashaanle Ismaciil Cabdi Maalik Maalin oo la hadlay Idaacadda Ciidamada qalabka Sida ayaa sheegay in Kumaandooska Soomaliya ay u daateen Saldhigyada Nabadiidka Al-shabaab ay ku lahayeen degaanno hoostaga gobolka Jubbada Hoose
Taliye Ismaciil waxa uu sheegay in ciidamada Danab ay Howlgalka ku dileen Labo Horjooge iyo 11 Maleyshiyaad ah oo ka tirsan Nabadiidka.
Taliyaha Kumaandooska Soomaaliya ayaa horjoogayaasha Howlgalka lagu dilay waxa uu Magacyadooda ku kala sheegay, Horjooge Xirow oo Nabadiidka Al-shabaab u qaabilsanaa degaanka Dhisheeg waamo, iyo Cabdi Maxamed Bashiir oo argagaxisada Al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale Ciidamada Kumaandooska Danab ayaa burburiyey Saldhigyada Al-shabaab ay degaanadaasi ku lahayeen.
Maqaal horeMadaxweyne Qoor-Qoor oo saaka ku sii jeeda magaalada Baydhabo
Maqaal XigaMareykanka oo shaaciyey magaca sarkaal sare oo Al-Shabaab looga dilay Saakow